Kumiswa, Izifundo ngamazwe
Abantu bathanda ukuba izilinganiso ezahlukene kanye ngezigaba amazwe ngokuvumelana nezimfuno ezahlukene. Ivame kunakwe ezahlukahlukene. Ake sibheke izinto ezifana ikhwalithi yefundo kabanzi. Hlangana no-uhlu, okubandakanya emazweni anamazinga aphakeme abantu abaphethwe imfundo izinga! Ukuze ahlanganise uhlu namasiko akhawunti zemfundo nokutholakala kohlelo, kanye ukubaluleka kwemfundo enjalo emhlabeni futhi isibalo sabantu ngezinga.
I Russian Federation ingenye amazwe abafundile kakhulu. Ngokwesibonelo, uma iqhathaniswa nayo China kane abantu abaningi imfundo ephakeme. Konke lokhu kuvumela Russia ukuba luthathe liyindawo efanelekayo emhlabeni, kukhona ngempela ukunikeza ezingeni ezinhle ulwazi.
Canada waqala uhlu abafundile kakhulu kakhulu. Kulelizwe North American amaphesenti abantu ayisishiyagalombili nesishiyagalolunye kungaba ukuziqhayisa imfundo ephakeme. Abantu abaneminyaka kusuka engu-25 kuya ku-64 ubudala ungathola degree ngaphandle kobunzima.
EJapane, ezingeni zemfundo ephakeme kakhulu. Cishe amahlanu amaphesenti abadala Japanese ungakwazi ngizibonge degree zesayensi. Lena kwelinye lamazwe lapho yaseyunivesithi ithuthukiswe kahle. Lapha, eliphakeme lolwazi: cishe sasiyikhulu namashumi abangaba amaphesenti angu-uyakwazi ukufunda nokubhala, ukwenza imisebenzi zezibalo kanye nokunye okufana nalokho.
Kuyinto ezweni lapho abantu abaningi bayakwazi ukuthola iziqu ezifundweni. imfundo ephakeme iyinto enkulu. eyishumi nesithupha kuphela amaphesenti yomphakathi wabantu abaneminyaka ephakathi kwengu-25 no-64 ababa namandla akumelana nabo baqede imfundo yabo yamabanga aphakeme.
Ngokwesilinganiso, amane nantathu kuphela amaphesenti America bangakhumbula ngizibonge degree. Noma kunjalo, lokhu ezingeni kahle eliphezulu lolwazi. Ucwaningo lwamuva luye lwabonisa ukuthi izinga lemfundo e-United States iqala ukuncipha. Noma kunjalo, amaphesenti abantu ayisishiyagalombili bakwazi ukuthola i-diploma.
Lena kwelinye lamazwe esiqine ngokuya isayensi, lapho cishe ingxenye yabantu abadala ukuthola degree. Ayisithupha nesithupha abangaba amaphesenti angu-abaneminyaka 25 kuya ku-64 bakwazi ukuphothula ekolishi ngaphandle nobunzima. Ayikho kancane umxhwele futhi kubonakala ekukwati kufundza nekubhala izinga e-South Korea, he is fike of aphakeme e-Asia.
E-Australia, ezingeni kahle eliphezulu lemfundo, futhi abantu abaningi kakhulu ukuthola ama-diploma, nokho-degree ezifundweni akuzona okungaka. Cishe, isizathu itholakala lokuthi ukuthi ukuqeqeshwa e-Australia kuyinto lemali umxhwele isikhathi ukuthi akuwona wonke umuntu angaba namandla okuwunikela.
E-UK, amaphesenti amane nanye sabantu kungaba ukuziqhayisa ngezinga ngokwesayensi. Kuyinto ezweni lapho isibe irekhodi inani labafundi besifazane abaneminyaka engu-25 no-34 ubudala. Iningi laba bafundi abakuthola ngezinga, kunokuba nje kokuvakashela ekolishi noma esikoleni lobuchwepheshe.
Kuleli zwe, abantu abaningi kanye imfundo ephakeme. Ngaphezu kwalokho, ngokusho izibalo, cishe ayisishiyagalolunye nanye amaphesenti ezingane kusukela ngeminyaka emithathu kuya kwemine ezihilelekile emfundweni ekuseni. Lapha umxhwele uthando lokufunda ukufunda nokubhala izinga kunanoma iyiphi yobudala: cishe bonke abakhileyo kuleli zwe bayakwazi ukufunda nokubhala.
Kukhona cishe amane amaphesenti abantu nge isimo iziqu ze-bachelor noma ngaphezulu. Ngaphezu kwalokho, cishe sasiyikhulu namashumi amaphesenti izingane esikoleni. Isilinganisongqo ezintathu abafundi abangamaphesenti angu-Irish imfundo ngempumelelo ngokuphelele. Ngokulinganayo umxhwele yizinga kokukwazi.
EJalimane, lapho esebenza khona isimiso khulula imfundo emphakathini. Emazweni amaningi, uyakucabangela degree zesayensi eJalimane njengoba kutholakala emphakathini. Ngaphezu kwalokho, leli lizwe inenani ekukwati kufundza nekubhala izinga emhlabeni.
Kuyinto izwe lapho izingane kufanele ngiye esikoleni. UHulumeni Finland uthethe umthwalo egcwele ye izinga lemfundo zezakhamuzi zakulelo lizwe.
ENetherlands and Norway
Lawa mazwe amehlo ngoba ziningi izinhlelo zemfundo ngolwazi olunemininingwane mayelana nabo. Vvozmozhnost ukufunda kukhona wonke umuntu.
Ukukhuluma ezingeni lolwazi emazweni ase-Asia, phakathi kwezinto zokuqala okukhulunywa Philippines. Kuleli zwe, eziningi ithalente. Kuyinto izwe nemvelo enhle futhi cuisine, ngaphezu, abantu bakhona phakathi yimpumelelo kakhulu emhlabeni. Lena akuyona kuphela iholidi kakhulu, kodwa futhi indlela engcono imfundo. abantu Lapha, hhayi kuphela bafundile, amaningi awo bakhuluma isiNgisi, okuyinto kusho okuningi ngokuthi ikhwalithi yefundo kulelizwe.
Lena kwelinye izwe lase-Asia, lapho ifanelwe indawo phezulu ohlwini lamazwe abafundile kakhulu. ENdiya, ukuthabela umlando onothileko ke ubuchwepheshe ezithakazelisayo kakhulu nesiko. Akukhona nje kuphela ezimnandi ukuhlala kuyo, kukhona okukhulu ukuze uthole imfundo. Ingabe ikhona enye into oyidingayo umfundi. ENdiya, zikhona izikhungo zemfundo wezinga eliphakeme kakhulu, amadiploma bayigugu emhlabeni wonke. abafundi Kukhona Bavela emazweni ahlukene. Kuyinto okukhethayo ephelele ubani ofuna ukuthola imfundo.
Taiwan - iyizwe elihle elinesimo umnotho oqinile kanye namalungelo esintu evikelekile. Ngo isimo uhlelo imfundo enkulu. Kukhona engaphezu kwekhulu izikole ndlela ehlukene kwezesayensi. Ngisho izingane zifunde ubuchwepheshe bama-computer, yobuciko nesayensi abathintekayo. Ezweni lonke, izikole eziningi nezinye izikhungo ezenza imfundo yibo bonke abahlali.
Isimiso semfundo eFrance kuyahluka ezingeni ngokwanele eliphakeme lomsebenzi. Kukhona engaphezu kwekhulu izikhungo yesayensi lapho ungathola degree. Amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye labantu ngezinga elithile, futhi amaphesenti amabili bekwi ngemva kokuthola yayo ngesayense. Ngaphezu kwalokho, e-France, ngenkuthalo ubambisene izikhungo angaphandle: kukhona izethulo eziningi zemfundo ezidumile zemfundo ezivela emhlabeni wonke.
Poland - lena kwelinye lamazwe abafundile kakhulu eYurophu. Umbiko uqhuba uthi zakamuva, ke lifaka yesihlanu kuleli zwekazi nanye - emhlabeni. izikole Polish bafanelwe udumo. Ezemfundo Level lapha lingaphezulu ngisho kuka zase-UK e-United States. Evelele kakhulu sikhungo ezihlobene-mathematics nesayense kungenza. abafundi esikoleni ePoland ukukhombisa imiphumela emihle izivivinyo.
Lona omunye izwe eYurophu, i umxhwele lizinga lelisetulu lelwati. Lapha-ke ingenye izinhlelo imfundo engcono kakhulu emhlabeni. Ngo-2009, abantu abayizinkulungwane ezingamakhulu amabili babesebenza kwezemfundo. Kubonakala Okhahlamba ababeyizazi hhayi kuphela ohlelweni yasebhange, kodwa futhi sokuthola ulwazi. Itholakala izinhlangano onenjongo imisebenzi abantu abavela emhlabeni wonke. Ukuze abafundi abafisa ukubhekana emnothweni, kukhona uhlelo kakhulu ngokwesayensi.
ESpain, imfundo ixhaswe ngezimali yi-state, ke kuphoqelekile izingane ezivela eziyisithupha nesithupha. Ngokuvamile, abafundi benza abayisishiyagalolunye emihlanu, phakathi kosuku - ikhefu eyadonsa amahora amabili. Ngo-2003, kwatholakala ukuthi abangaphezu kuka ayisishiyagalolunye eziyisikhombisa amaphesenti izakhamuzi zalesi uhulumeni angakwazi ukuziqhayisa imfundo enhle. Lapha eliphakeme ukufunda nokubhala, okuyinto likhula kuphela. Abantu phezu nanhlanu ungakwazi ukufunda, ukutlola kanye ukukhuluma ngokushelelayo ngezilimi eziningi. Ithi okuningi mayelana nohlelo lwesikole.
Ngu 2050, i-plastic olwandle ingaphezu inhlanzi
I-glycine forte: imiyalo yokusetshenziswa
Ngo usebenzisa le mikhiqizo, uyolikhohlwa zonke esikhumbeni mayelana ezomile